MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဖားကန့် တောက်ပကြယ်ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်ရေးကုမ္ပဏီအတွင်း ကချင် လူငယ်(၁)ဦး ဘက်ဖိုးဖြင့် အပိုင်းပိုင်း သတ်ဖြတ်ခံရ
“ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်သိရဖို့ ကုမ္ပဏီ
ကိုခေါ်ပြီးတွေ့ဖို့လုပ်ထား တယ်။”ဟုဖားကန့်ဒေသခံရှိ KIA,တပ်ရင်း (၆)
အသက် (၂၀) ကျော်အရွယ်ရှိ လမုန်ဂွမ်ဂျာအောင်သည် သူငယ်ချင်းများနှင့်
အတူ ရေမဆေးသွားကောက်စဉ် အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ မြေစာများသွားသွန်စဉ် လက်၊ ကိုယ်၊ ခြေထောက် တစ်ခြားစီတွေ့ရပြီး၊ ခေါင်းကိုမှုညနေပိုင်းမှ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုအလောင်းအား မီးသဂျိုလ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးဒါရှီလဆိုင်းမှဆိုသည်။
“အခုက ကျွန်တော်တို့လည်း အသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။ ကုမ္ပဏီတွေတော့ ဒီလိုဖြစ်တိုင်း အမြဲတမ်း မတော်တဆလို့ပဲပြောတာပဲ။ ရေးမဆေးသမားတွေကျောက်ကောက်ရရင်တော့ ကျောက်တောင်းတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ဘာမှတာဝန်ယူဖြေရှင်းတာမရှိဘူး။”ဟုဦးဒါရှီလဆိုင်း
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ည သူငယ်များအတူ ရှိနေစဉ် ဓာတ်မီးမှ ဓာတ်ခဲ
ကျသွားသည့်အတွက် ဓာတ်ခဲသွားရှာမည်ဟုဆိုကာ သွားလိုက်ပြီး နောက် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
MUNG SHAWA NSEN (KIO/KIA Ningbaw Ningla Ni Hpang De)
Oct 31, 2014 ya shani Hpakant Wa Je Maw kaw (တောက်ပသော ကြယ်အလင်း) Company hku nna Jinghpaw Mung masha Slg. Gum Ja Awng hpe sat kau ai mabyin hpe Ahkyak nlu la ya ai rai yang anhteaKIO/KIA nga ai gaw kaman sha rai mat sai.
-- Ndai masha sat amu hte seng nna KIO/KIA hku nna ja ja ndau shabra ai lam, ahkyak la ai lam hte Warning jaw ai lam ni hpe gwi gwi rip rip tawk hprut galaw sa wa ra ai.
-- KIO/KIA gaw kaja wa Wunpawng Myu sha yawngagawng malai tai ai asuya re teng yang gaw ndai zawn tinang amyu masha ni ntara ai hku sat nat zingri hkrum ai hpe ja ja ninghkap ra ai, Mung masha hpang maga ja ja tsap ra na re.
-- KIO/KIA gaw Wunpawng Myu sha yawngakam hpa ging ai asuya tai wa na matu gaw, (1) Mung shawaansen hpe madat ra ai, (2) Mung shawa hpe tsawra hkungga ra ai, (3) Mung shawaashim lam hpe tsep kawp lit la ya ra ai, (4) Wunpawng lamu ga ni hpe makawp maga lu ra ai, (5) Mung shawaanga mu nga mai lam hpe madung tawn nna lam tam chinyhka hpaw ya ra ai.
Rai tim ya gaw Mung shawa hpe shim lam mung nlu jaw wa, lamu ga mung nlu makawp wa, tat hkrai tat kau, mung shwaanga mu nga mai lam hpa mung nlu galaw ya, rai nga sai, deamajaw KIO/KIAarawt malan pangdung hte shai mat wa nga ai zawn byin nga sai.
at 11/10/2014 09:34:00 AM